iCare 3.0 - Man Down System - Lone Worker Were n'Ọrụ Ngwọta Nchebe - OMG Solutions
iCare 3.0 - Man Down System - Lone Worker Were n'Ọrụ Ngwọta Nchedo
iCare 3.0 Were n'ọrụ GPS Tracker Ngwaọrụ nwere ike nyochaa ọnọdụ onye ọrụ na ezigbo oge. Mgbe ọdịda dara, Nkwado 3.0 nwere ike ịkpalite ịdọ aka na ekwentị ekwentị onye ọzọ na akpaghị aka, ka enyere enyemaka ahụ ozigbo
- Ndị Owu Lone
- Ndị Ọrụ na Ọnọdụ Nsogbu
- Remote Ọrụ
1. Obere sized, Waterproof IPX7, Rubber mkpuchi, na-eche nke ọma.
2. Mfe bọtịnụ mkpọtụ SOS dị mfe.
3. Ntughari olu mgbe olu malitere ma chetara ọrụ.
4. Uzo oku abuo.
5. GPS nsuso n'èzí na nlele ime ụlọ / BLE / WIFI.
6. Ebe ntinye ụgbọ mmiri na-enye ngwa ngwa ngwa ngwa ma dịkwa mfe iji.
7. Daa mkpu maka ndị ọrụ na ndị ọrụ.
8. Odo mkpu mpaghara Geo, ngagharị / enweghị mkpọtụ mkpọtụ wdg.
9. Wuru na-vibration na ngagharị ihe mmetụta.
10. Njikọ ọnụ 5.0 njikọ.
11. Re-bulite data maka ebe kpuru ìsì.
12. UBX teknụzụ GPS.
13. Akwa GPS ziri ezi na nkwado AGPS.
14. IOS / Android APP + WEB nlekota ọrụ.
15. FOTA (Firmware kwalite n’elu ikuku).
16. Obere na obere ibu, naanị 1.4 oz.
Nchọpụta Fall & nchọpụta na-enweghị atụ
Onye ọrụ na-enwe ike ịkpọtụrụ onye na-elekọta ha site na ịpị bọtịnụ n'oge ihe mberede.
Na-adaba adaba itinye / Mfe & Uru (4 Agba)
Ngwa weebụ & Ngwa ekwentị maka nlekota oru (ụzọ akụkọ ihe mere eme / ezigbo oge)
Web & smartphone ngwa na a nsuso n'elu ikpo okwu ga-nyere. Nwere ike ịlele ọnọdụ ngwaọrụ (ụzọ akụkọ ihe mere eme / ezigbo oge) na PC gị, Mbadamba ụrọ ma ọ bụ Smartphone.
Nkọwapụta izugbe model GPS050D
Dimension 2.4 * 1.7 * 0.6 sentimita asatọ / 61mm * 44mm * 16mm
Arọ 1.4 oz / 40g
Nkwado batrị Na-akwụghachi ụgwọ, 3.7V, 850mAh
Ịgbaji voltage 5V DC
operating okpomọkụ -20 Celsius C + 80 Celsius C maka ịrụ ọrụ
-30 Celsius C ka + 70 Celsius C maka nchekwa
ndụ batrị Ruo awa 72 n'okpuru iji nkịtị
Hardware mmetụta Ihe mmetụta & ihe ịma jijiji
njikọta 4 Pin-Igwe Ọdụdọ maka odori
Oghere kaadi SIM Na-mba SIM kaadị
Nchekwa Flash 1MB
Igwe na-ekwu okwu & ọkà okwu
GPS Chipset GPS Ubx M8130 (AGPS nkwado)
nkwado GPS na Glonass
Onye natara ugboro 1575.42MHz
Mbido oyi ihe ruru 26s
Mmalite na-ekpo ọkụ ihe ruru 2s
Mmalite mmalite ihe ruru 1s
poolu Wuru na seramiiki mpi
Nzuzo 3885 4 Echiche Taa